Muuse Biixi oo eedeyn xoogan u jeediyeey Madaxweyne Farmaajo – Radio Daljir
Muuse Biixi oo eedeyn xoogan u jeediyeey Madaxweyne Farmaajo
Febraayo 3, 2019 5:15 b 0
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdi ayaa ku eedeeyay dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo inay ku heyso dagaal dhaqaale iyo cunaqabateyn joogto ah.
Khudbad uu ka jeediyay Munaasabadda Xuska Ciidamada Somaliland ayuu sheegay in tan iyo markii la doortay Madaxweyne Farmaajo ay kala kulmayaan dagaalo, cunaqabateyn dhaqaale iyo dhibaatooyin kale.
“Illaa maalintii la doortay Farmaajo waxaa nagu socda weerar joogta oo qaawan, dhinac walba ayay ku hayaan Somaliland, dhaqaale dhaqaale, cunaqabateyn iyo Barobagaando joogto ah”ayuu yiri Muuse Biixi.
Waxaa uu sheegay in dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay ku socoto meel aan la garaneyn, iyadoo duulaan ku ah maamul goboleedyadii ka tirsanaa, Qaramada Midoobey sida uu yiri.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horay u joojisay kaalmadii dhaqaalaha ee taakuleynta ee looga qoondeeyay barnaamijkii New deal, iyadoo Wasiirka Qorsheynta Jamaal Xasan Maxamed oo ka mid ah Wasiirada ugu awoodda badan warqad uu sanad ka hor qoray ku hor-istaagay in la cusbooneyso taageerada gaarka ah ee la siiyo Somaliland.
Askari Muqdisho ku dilay Hooyo Haysta Sideed Caruur ah